Dawladda Kenya oo ku Eedaysay Hay’adda UNHCR Taageeridda Al-shabaab |
Dawladda Kenya oo ku Eedaysay Hay’adda UNHCR Taageeridda Al-shabaab
Dawladda Kenya ayaa markale eedeysay hay’adda Qarammada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR inay taageero siiso kooxaha dhibaatooyinka wada oo Al-shabaab ka mid tahay oo ku sugan qeybo ka mid ah dalka Kenya.
Sida lagu faafiyey shabakadda la yidhaa foreignpolicy.com oo Jamhuuriya soo xigtay, Xukuumadda Kenya ayaa ku dooday in dad badan oo ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab, Gobolka Woqooyi-bari ee dalkaas ay qayb ka yihiin kooxo weerarrada ka fuliya gudaha dalkeeda, iyadoo xustay in weerarro dhowr ah oo ka dhacay ku lug lahaayeen rag ka tirsan Al-shabaab oo ka tegay xeradaas, iyadoo aanay jirin wax caddaymo ah oo Kenya u hayso eedaymahaas la dul dhigay dadka qaxootiga ah.
Madaxweyne-ku-xigeenka Kenya Mr. William Ruto ayaa hore fagaare ugaga dhawaaqay amar uu ku bixiyey in xerada qaxootiga Soomaalida ee Dhadhaab lagu xidho saddex bilood gudahood, isagoo furnaanshaha xeradaas ku tilmaamay mid khatar weyn ku ah ammaanka dalkiisa.
Sidoo kale, Wasiirka Daakhiliga Kenya ayaa isna kulan magaalada Jineefa (Geneva) ee dalka Switzerland ka dhacay bishii hore ka sheegay in shaqaale ka tirsan hay’adda UNHCR ay taageeraan dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab, sidoo kalena hawlgallo ciidammada ammaanku ka sameyeen xerada Dhadhaab ku qabqabteen hub iyo rasaas.
“Waxa jira xubno ama shaqaale ka tirsan UNCHR oo fududeeya hawlgalada argagixisadu ka fuliyaan gudaha dalkan (Kenya), taasina waa wax noo muuqda,” ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya.
Hasayeeshee, Afhayeen u hadlay Hay’adda UNHCR, ayaa meesha ka saaray eedaymaha uga yimi dhinaca dawladda Kenya, kaasoo tilmaamay inay layaab ku noqotay arrintaasi, waxaannu yidhi; “waa wax lala yaabo, hay’addu (UNHCR) kama war qabto in cid shaqaalahadeeda ama hawlwadeennadeeda ah ay ku kaceen wax la xidhiidha argagixisonimo.”
Dawladda Kenya waxay dhawrkii bilood u dambeeyey wadday qorshe dib looga celinayo qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeradaas oo lagu qiyaaso nus malyuun qof, kuwaasoo qaarkood halkaas deganaayeen tan iyo sannadkii 1991kii.